အီတလီစတိုင် Lasagna ခေါက်ဆွဲ | Wutyee Food House
« ဂဏန်း မာဆလာဟင်း
တူနာ ပန်ကိတ် »
May 3, 2012 by chowutyee အီတလီစတိုင် Lasagna ခေါက်ဆွဲ
၂။ Bolognese Sauce
၃။ Ricotta ချိစ် – ၁၆အောင်စ
၃။ တရုတ်နံနံပင် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာ
၅။ ကြက်ဥ – ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
၄။ Mozzarella ချိစ် – ၃၀၀ ဂရမ်
(Mozzarella cheese ၊ Ricotta cheese ကို Martket Place (ဓမ္မစေတီလမ်း CityMart) တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်)
Bolognese Sauce ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
အမဲသား – ၃၀ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ – ၁၈၀ ဂရမ်
ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် – ၂၀၀ ဂရမ်
မုန်လာဥနီ – ၂ခု (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ပင်စိမ်း – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ (ပါးပါးလှီးပါ)
ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
Oregano၊ Thyme – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းစီ
(အနောက်တိုင်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို Martket Place (ဓမ္မစေတီလမ်း CityMart) တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်)
တရုတ်နံနံပင် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး အမဲသားဆော့ချက်ရန် ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတို့ကို ဆီသပ်ပေးပါ။
၂။ ပြီလျှင် နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားသော အမဲသား၊ မုန်လာဥနီတို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၃။ အရသာအတွက် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့၊ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်၊ ဆား၊ သကြားတို့ထည့်ကာ ရေ(၁ခွက်) ထည့် ရောမွှေပေးပါ။
၄။ အမဲသားကျက်သွားမှ ပင်စိမ်း၊ တရုတ်နံနံ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ oregano၊ thyme တို့ကို အပေါ်မှ ဖြူးပေးပါ။
၅။ အမဲသားဆော့ချက်ပြီပြီဆိုလျှင် Lasagna ခေါက်ဆွဲလုပ်ပါတော့မည်။
Lasagna ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း
၁။ အရင်ဆုံး ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ricotta ချိစ်၊ ကြက်ဥ၊ တရုတ်နံနံတို့ကို ရောမွှေထားပါ။
၂။ ထို့နောက် ဗန်းတစ်ခုထဲတွင် ချက်ထားသော အမဲသားဆော့(၁ခွက်ခွဲ) ခန့်ကို ခင်းလိုက်ပါ။
၃။ ပြီမှ ပထမဆုံးအလွှာမှာ Lasagna ခေါက်ဆွဲပြား ၃ခုကို ခင်းလိုက်ပြီ အပေါ်မှ Ricotta ချိစ်များ၊ Mozzarella ချိစ် ပြားများ ခင်းပေးပါ။
၄။ ပြီလျှင် ဒုတိယအလွှာတွင် Lasagna ခေါက်ဆွဲပြား ၃ခုကို ထပ်ခင်းပြီ အမဲသားဆော့နဲ့ ခြစ်ထားသော ချိစ်များ ဖြူးပေးပါ။
၅။ ထို့နောက် တတိယအလွှာအတွက် Lasagna ခေါက်ဆွဲပြား ၃ခုခင်းပြီ Mozzarella ချိစ်ပြားများ ခင်းပေးပါ။
၅။ ထိပ်ဆုံးအလွှာကိုတော့ Lasagna ခေါက်ဆွဲပြား ၃ခုကို ထပ်ခင်းပြီ အမဲသားဆော့နဲ့ ခြစ်ထားသော ချိစ်များ ဖြူးပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် ဗန်း အပေါ်မှ သတ္တုပြား (aluminum foil) ကို အုပ်လိုက်ပြီ Oven ထဲထည့်ကာ ၁၉၀ ဒီဂရီဖြင့် အပေါ်မီး၊ အောက်မီးနဲ့ ၃၅မိနစ်ခန့် ဖုတ်ပေးပါ။
ရ။ ပြီလျှင် သတ္တုပြားကို ဖယ်ပြီ နောက်ထပ် ၂၅မိနစ် ထပ်ဖုတ်ပေးပါ။
၈။ Lasagna ကို ရပြီဆိုလျှင် ၆ပိုင်းပိုင်းကာ ပူပူလေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 20 Comments	20 Responses
on May 3, 2012 at 6:38 am | Reply mi mi
i will try…thz…sis
on May 3, 2012 at 7:44 am | Reply phyu thant
စားချင်စရာကြီး …သရေတွေကို ကျလာပီ ..
on May 10, 2012 at 2:40 am | Reply chowutyee
🙂 စားသွားပါ သူငယ်ချင်း..
on May 3, 2012 at 7:49 am | Reply ခင်ယမုံ
Plz try it Ma!!😀
on May 3, 2012 at 8:21 am | Reply thida
oh ,look delicious and I will try it.Thanks alot.
Plz try it! Thanks🙂
on May 3, 2012 at 9:10 am | Reply Hnin Ei Khaing
Yeah it is yummy!! Thanks…😛
on May 3, 2012 at 9:26 am | Reply Cho Wut Hmone
kha lae eat chin tar kyar pe….ko lote pay ma bae eat top mal hee😉
on May 10, 2012 at 2:42 am | Reply chowutyee
haaa I will do for you…😀
on May 3, 2012 at 9:57 am | Reply Thet Myat Thu
Lasagna ကိုကျောင်းတုန်းကလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့မစားရတာကြာသွားပြီ။ အစတုန်းက တစ်ခါမှကိုမစားဖူးတဲ့အပြင် နာမည်တောင် ဘယ်လိုထွက်ရမှန်း မသိဘူး။ နောက်တော့မှ လာစညာ လို့ခေါ်တာတဲ့ဆိုပြီး ချက်တော့မှ စားဖူးပြီး ကြိုက်သွားတာ။ တော်တော်လေးစားယူရတယ် အီလို့။ အခုမစားရတာကြာတော့ လွမ်းသလိုလိုတောင်ရှိတယ်။ အခုလိုတင်ပေးထားတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရင်က အတိတ်တွေကိုပြန်သတိရအောင်လုပ်ပေးလို့ပါ။
on May 3, 2012 at 10:31 am | Reply အန်တီတင့်
တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးသေးတဲ့ အစာမို့ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာ ဖတ်ရှု မှတ်သားသွားပြီ ဝတ်ရည်ရေ။ နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်… နောက်လည်း အားပေးအုန်းနော်..😀
on May 3, 2012 at 11:03 am | Reply ၇တနာ
Thanks also Ma Yadana
on May 4, 2012 at 4:28 pm | Reply kkwin7@yahoo.com
i will try it, thanks sister
on May 10, 2012 at 2:44 am | Reply chowutyee
Thanks you too sis
on May 14, 2012 at 1:56 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] May 3, 2012 အီတလီစတိုင် Lasagna ခေါက်ဆွဲ […]